FC PLATINUM, ESPERANCE DHUMA-DHUMA! … Munhandare isina vatsigiri | Kwayedza
18 Jan, 2019 - 00:01	 2019-01-17T17:12:40+00:00 2019-01-18T00:03:28+00:00 0 Views
NORMAN Mapeza, murairidzi weFC Platinum anogashira mashoko ekuti chikwata chake chichatatsurana necheEsperance manheru eChishanu chino munhandare ichange isina vatsigiri mumutambo weCAF Champions League. Sangano rinotungamirira nhabvu muAfrica, reConfederation of African Football (CAF) rakatonga kuti Esperance itambe mitambo yayo miviri inotevera pamusha payo munhandare ichange isina vatsigiri.
Danho iri rinouya mushure mekunge vatsigiri veEsperance vakonzera zhowezhowe pamitambo yechikwata ichi miviri nezvikwata zvinoti Primero Agosto yekuAngola neAl Ahly yekuEgypt.
Zvinoreva kuti mutambo weEsperance neshasha dzemuZimbabwe, FC Platinum, uyo uriko nemusi weChishanu ikoko, uchatambwa munhandare ichange isina vatsigiri – danho rinogadzirwa naMapeza semakomborero asi ari matambudziko nekune rimwe divi.
“Tingade kutamba navo (Esperance) vatsigiri varimo, asi danho iri (mutongo weCAF) rinogona kutinakira,” anodaro Mapeza.
“Chekutanga ndechekuti danho iri rinovabvisa pakuti vari kutamba vari pamusha, tose tova nemikana yakafanana.
“Zvoreva kuti, kana dai zvazvo isu tichatamba tisiri pamusha, tichaita setiri pamusha uye Esperance ichange isina mutsigiri uya wechi12.
“Asiwo, kushaikwa kwevatsigiri kunogona kuuraya kunakidza kwemutambo sezvo kuvapo kwavo kuchingoita kuti mutambo uendeke,” anodaro.
Zvenhandare isina vatsigiri padivi, Mapeza achapinda mumutambo uyu nehuchenjeri.
“Hurongwa hwedu hahuna kusanduka,” anodaro Mapeza.
“Aka ndekekutanga kedu kutamba muCAF Champions League saka chakakosha kuti machinda angu anakirwe nemutambo achidzidza.
“Kusiyana neOrlando Pirates, Esperance chikwata chakatosiyana, naizvozvo tichavaremekedza.
“Esperance inotyisa, ndivozve vane mukombe wemuAfrican uyu saka tichatamba navo takachenjera,” anodaro.
Keputeni weFC Platinum, Mhari anowirirana nezvinorehwa nemurairidzi wake achiti mutambo wavachangobva kuita mangange 0-0 neOrlando Pirates yekuSouth Africa waunza chivimbo muchikwata chekuZvishavane ichi.
“Tisati tatamba neOrlando Pirates, tanga tichingotambwa hunyunyu muchikwata chatiri. Ndinovimba izvi zvasanduka,” anodaro Mhari.
“Takakwanisa kumira uye mutambo iwoyo wakatipa chivimbo.
“Machinda ari kufara uye tinovimba kuramba takadaro patinotamba neEsperance Chishanu chino,” anodaro.